राजनीति – Page 48 – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
रुकुमको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाकी निर्वाचित महिला सदस्यको हत्या
रुकुम २७ असार । स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचनमा रुकुमको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–७ बाट निर्वाचित सदस्य बयान कामीको हत्या भएको छ । उनको खुकुरी प्रहारबाट हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी नेपाली कांग्रेसबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन । हत्याको..
अहिले सम्मको चुनावको परिणाम यस्तो छ, कुन ठाउमा को -को विजयी भए ? (नामावली सहित)
प्रकाशित मिति: २६ असार २०७४, सोमबार
काठमाडौं, २६ असार दोस्रो चरणको चुनावमा प्रमुख पदमा कसको कति स्थनजान विजयी हात परे हेनर्सस सुची यस प्रकार छ प्रमुख पदमा विजयी नेपाली कांग्रेस नगर–४५, गाउँपालिका–७७ १२२ मोरङको विराटनगर महानगरपालिका– भीम पराजुली १२१ झापाको मेचीनगर नगरपालिका– विमल..
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि मतदाता नामावली संकलन गरिने , नामावली बनाउन स्थायी ठेगानामै जानुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं २६ असार । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ । आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावको लागि यही साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगको निर्णय अनुसार मतदाता नामावली बनाउनका लागि अब स्थायी..
राष्ट्रपतिको १६ करोडको गाडीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिए संसदमा जवाफ, यो महंगो होइन
काठमाडौं २६ असार । राष्ट्रपति कार्यालयले १६ करोडको गाडी माग गरेको विषयमा यतिबेला चर्चा पाएको छ । राष्ट्रपतिको लागि मंहगो गाडी माग गरिएको विषयमा बजारमा चर्चा चलेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयमा जवाफ दिएका छन । प्रधानमन्त्री देउवाले..
विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुबैमा काँग्रेस विजयी
विराटनगर २५ असार । विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसले जित हात पारेको छ । गएराति सम्पन्न भएको मतगणनापछि प्रमुख पदमा काँग्रेसका उम्मेदवार भीम पराजुलीले २३ हजार ३१ मत प्राप्त गरी विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका विनोदकुमार..
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा नेकपा एमाले विजयी
कञ्चनपुर, २५ असार । स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम अन्तिम चरण पुगेको छ । अधिकांश गाउपालिकाको मत परिणाम सकिएको छ भने नगरपालिकाको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ । सोही क्रममा कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम आएको छ । जस..
एजेन्सी २४ असार । भारतको पश्चिम बंगालमा अलग गोर्खाल्यान्ड राज्य माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनरत गोर्खामाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार राति सोनादामा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा..
‘संविधान संशोधन विधेयक पास पनि हुँदैन, अर्को पनि आउँदैन’- ओली
विराटनगर २४ असार । दोश्रो चरणको निर्वाचन पछि संविधान संशोधन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिए एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीको बोली फेरिन थालेको छ । शनिबार विराटनगरमा पत्रकारसंग कुराकानी गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले सरकारले संसदमा दर्ता भएको संविधान..
बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठक सकियो, के आयो निष्कर्ष ?
काठमाडौं २४ असार । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख सत्तारुढ दलको बैठक भर्खरै सकिएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुको सहभागीता रहेको थियो । संसद्‍मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि..
स्याङ्जा २४ असार । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जननिर्वाचित नगरपालिका प्रमुखलाई उजुरी परेको छ । स्याङ्जा सदरमुकाम पुतलीबजार नगरपालिका प्रमुख र नगरपालिका कार्यालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय..